Hlola iMumbai, India - World Tourism Portal
Hlola iMumbai, India
Yini ukubona. Izindawo zokudlela ezihamba phambili eziphezulu eMumbai, India
Amawebhusayithi ezokuvakasha asemthethweni eMumbai
Bukela ividiyo mayelana neMumbai
Hlola iMumbai iyidolobha eliyindawo yonke, ebelaziwa njengeBombay, idolobha elikhulu kunawo India nenhloko-dolobha yesifundazwe saseMaharashtra. IMumbai ekuqaleni ibiyingqungquthela yeziqhingi eziyisikhombisa ezisogwini lwaseKonkan lapho ngokuhamba kwesikhathi zahlanganiswa khona ukwakha idolobha lesiqhingi iBombay. Lesi siqhingi saphinde sahlangana nesiqhingi esingumakhelwane iSalsette ukuze sakhe iGreater Bombay. Idolobhana linabantu ababalelwa emadolobheni amakhulu ama-21 million (2005), liwenza idolobhana elinabantu abaningi emhlabeni.
Akungabazeki ukuthi iMumbai inhlokodolobha yezentengiselwano yaseNdiya futhi ingenye yamadolobha amachweba amakhulu ezweni. Imvelo yaseMumbai njengedolobha laseNdiya elingama-eclectic ne-cosmopolitan libonakaliswa phambi kwe-Bollywood ngaphakathi kwedolobha, isikhungo sezimboni ze-Hindi nefilimu zomhlaba wonke ezinomthelela emhlabeni jikelele. Ibuye ibe yisibalo sabantu esikhulu kunazo zonke eNdiya.
IMumbai iyidolobha eliphithizelayo, elihlukahlukene futhi elinemidwebo konke okwalo. Umoya webhizinisi kanye nesantya sempilo esijabulisayo unikeza umehluko omkhulu kakhulu kuningi laseNdiya. Iphinde inhlokodolobha yezimali eNdiya kanye nenhloko-dolobha yesifundazwe saseMaharashtra.
IMumbai inezinkathi ezintathu eziyinhloko - Ihlobo, iMonsoon, neBusika (ihlobo elipholile kakhulu). Isikhathi esihle kakhulu soku vakashela phakathi nobusika phakathi kukaNovemba noFebhuwari. Umswakama ubuye buncane ngesikhathi sebusika, lapho isimo sezulu simnandi; amazinga okushisa aphansi yi-17 degrees centigrade futhi esiphezulu ngama-30-31 degrees. Ihlobo lisukela ngoMashi kuya ku-Meyi ngama-highs aphansi kuya maphakathi ama-30s. Kuyashisa futhi kunomswakama ngalesi sikhathi. NgoJuni kuya kuSeptemba yisikhathi semvula enkulu lapho idolobha ligasele izimvula ezinkulu. Idolobha ligcwele izikhathi ezimbili noma ezintathu futhi impilo ejwayelekile iyaphazamiseka kule sizini. Isimo sezulu sinomswakama omuhle impela unyaka wonke ngoba idolobha liphumla ogwini.
Njengoba inhloko-dolobha yezimali yaseNdiya, iMumbai inokuxhumana okuhle kakhulu namadolobha amakhulu emhlabeni jikelele.
Uma undiza usuka eYurophu ngokuvamile kushibhile ukundiza kusuka London, futhi kunezindiza eziningi nsuku zonke.
Kukhona izikhungo ze-ATM endaweni yokufika yamanye amazwe kanye nabashintshi bemali abaningi eduze nendawo ephumayo nayo.
Ama-ejenti wokuhamba namahhotela angahlela izimoto zangasese eziqhutshwa ngabashayeli bangasese ukuhlinzeka ngezinsizakalo. Kubiza kakhulu uma kuqhathaniswa namatekisi, kuyindlela ethembekile kunazo zonke, evikelekile, futhi ekhululekile yokuhamba uzungeze idolobha. Ukushayela eMumbai kungaba nzima, ngenxa yesiyalo sokushayela ngokushayela kabi, kepha izinsizakalo eziqhutshwa ngabashayeli abasebenza kahle zinengqondo kakhulu. Lokhu kungahlelelwa izinkampani zokuhamba noma online okuvela emazweni asuka kuwo. Kodwa-ke, uma umuntu efuna ukushayela izimoto ngokwazo, inketho yezimoto zokuzishayela zodwa iyatholakala.
IsiMarathi siwulimi olusemthethweni nolusemthethweni lwedolobha olusetshenziswa izinhlaka zoHulumeni BoMbuso, abaphathi bakaMasipala, namaphoyisa endawo, futhi nolimi lokuqala lwabantu bendawo.
IsiNgisi sisetshenziswa kabanzi emhlabeni wonkampani nasebhange nasekuhwebeni. Ezindaweni eziningi, uzokwazi ukudlula ngeHindi nesiNgisi.
Abasendaweni eMumbai bangakwazi ukukhuluma ngesiNgisi esaphukile bese kuthi labo abasebenza ezinkampanini nabaphakathi kwesigaba esiphakathi, esiphakathi nesiphezulu basekhulume kahle isiNgisi.
Kukhona izindawo eziningi eduze neMumbai lapho ungaya khona ukuyokhempa. Amatende angenziwa ngokuphepha ezindaweni ezifana ne-Lonavala, iTungarli Lake, iValvan Lake, iRajmachi, iMahableshwar, iPanchgani, iKashid nePhansad.
IMumbai isondele kakhulu eziteshini zamagquma, amabhishi kanye namahlathi. Izindawo ezinjengeMatheran, Lonavala, Alibaug, Khandala Panchgani neMahabaleshwar ezinye zezindawo okungenziwa kuzo ngempelasonto. Kukhona izinkampani eziningana ezixhuma zonke lezi zindawo nabahambi abathile nabahambi bezinkampani abavela eMumbai.
Okufanele ukwenze eMumbai, India
Amakhadi we-Visa ne-Master amukelwa kabanzi ezitolo zedolobha. Izikhungo eziningi zokuthenga zibuye zamukele iAmerican Express, AmaDinning kanye nenqwaba yamanye amakhadi. Kodwa-ke, ezinye izitolo ezincane noma izitolo ezenziwa ngumndeni zingahle zingawemukeli lamakhadi kanti imali ethize ingasiza lapha. Ama-ATM atholakala kabanzi futhi amakhadi amaningi okudonswa kwemali nawo amukelwa. Uma une-akhawunti yasebhange laseNdiya noma ikhadi lesikweletu, ungahle ungadingi ukuthwala imali eningi. Uma ungumfokazi, kungumqondo omuhle ukuthi uphathe imali ethile ukugwema izindleko ngenkathi usebenzisa ikhadi lakho lesikweletu noma lasebhange. Yini ongayithenga eMumbai
Ukumbozwa kweselula edolobheni kuhle. Baningi abahlinzeka ngezinsizakalo abanikezela ngezinhlelo ezahlukahlukene.
Ama-cybercafes akhiwe cishe kuwo wonke amagumbi omgwaqo futhi amanani aphansi impela. Yazi ukuthi kungenzeka ukuthi abagcinanga ukuhambisana nokuthuthuka kwe-hardware noma isoftware, ngakho-ke uma uzithola usungenye yazo, ungamangali uma unamathele kuqapha elincane, iWindows 98, ne-Internet Explorer 5.0. Futhi ukuphepha kwedatha kungaba yinkinga. Isixwayiso, shintsha iphasiwedi yakho ngemuva kokuyisebenzisa ku-cybercafe.
Ukuthola i-Wi-Fi eMumbai kunzima kakhulu ngenxa yezinkinga zokuphepha
Ukudla Njengakwezinye izindawo eNdiya, qaphela ukuthi udlani. Ngaphandle kwamahhotela amakhulu nezindawo zokudlela ezinkulu, hlala kude nemifino enamahlamvu aluhlaza, ukugqoka okususelwa kumaqanda, okufana nemayonesi, nenyama eyosiwe kuyingozi enkulu. Ngamafuphi, namathela ezintweni ezibilisiwe, ezibhakiwe, ezithosiwe noma ezihlotshisiwe.
Amanzi we-Thepha wamanzi aphephile noma kunjalo imibono yamanzi empompo iyahlukahluka, kepha izivakashi eziningi zikhetha ukunamathela ezintweni ezisebhodleleni. Amabhodlela amakhulu amanzi angathengwa ngemali ephansi kakhulu.
IMatheran (102 km / 1.5hrs): ingafinyelelwa bobabili ngomgwaqo nangesitimela. Ngokukhethwa kukho kwesitimela, thatha isitimela esingaphansi komhlaba ukuya eNeral futhi uthathe isitimela sohlobo olude samahora ukufinyelela uMatheran phezulu. Ngenye indlela, ingagibela.
Lonavala (111.5 km, 1.5hrs) Kufinyelelwe kangcono ngomgwaqo. Izitimela ezingaphansi komhlaba azihambelani ne-Lonavala futhi zingadinga ukushintshana ngesitimela eKarjat noma zithathe indlela ende yokuhamba ngesitimela.
Khandala (101 km / 1.5hrs) Hlola Lonavala.
IMahabaleshwar (242km, 7hrs) Kufinyelelwe kangcono ngomgwaqo.
ILavasa (i-186 km's) yidolobha elihleliwe eliseduzane neMumbai. Leli dolobha linikezela okuhehayo okuningi ukuvakashela njengeDamu laseVasasgaon, imigwaqo evunguza yama-bikers, imifino eminyene kanye nesimo sezulu esimnandi. Ukufika futhi kunikeza ukushushuluza kwe-jet, kayaking kanye nesikebhe kungenzeka echibini lapha. Imisebenzi ye-adventure njengokukhuphuka kwamatshe, ukugibela, nokuhamba.
UDaman (171 Km) ungenye yezindawo ezidumile zothando nokuya ngempelasonto yemibhangqwana ezimisele ukuhamba eduze kwaseMumbai. UDaman uhlukaniswe izingxenye ezimbili - iNanidaman neMotidaman. UDaman uthandwa izivakashi ngenxa yobuhle bayo obumangalisayo, amabhishi, nemisebenzi ye-adventure efana neParasailing, i-Adventure cycling, ne-Water Skiing.
I-Alibaug (i-95 km's) ngenye yezindawo ezidumile eduze kwaseMumbai edume ngamabhishi neminye imisebenzi nezindawo ongazihambela. Ungathatha idrayivu yokufinyelela e-Alibaug usuka eMumbai noma uthathe uhambo lokuya ngesikebhe ukusuka eGateway of India.